Ilokhu kukhona imithi eminingi emisha kanye indlebe amathonsi nabo bayajabula. Kodwa ngokuvamile, hhayi kuphela iziguli, kodwa futhi abasebenzi bezokwelapha kuba nzima ukuzulazula e inqwaba yezidakamizwa, ngoba anamagama ahlukene, kodwa ngokuvamile afana izindlela eyaziwa kakade ukwakheka kanye isinyathelo. Lesi sihloko sizosisiza ukhetha ilungelo indlebe amathonsi phakathi izipesheli eziningi izidakamizwa. Uyofunda indlela yokusebenzisa le mithi.
Abanye abantu ngephutha ikholelwa indlebe ayinangozi lehla-ejenti, kanye ngokuvamile umbono kungaholela nemiphumela kuyindaba eqakathekileko. Le mithi uma ingasetshenziswa kahle esikhundleni imiphumela yezempilo olulindelekile kungabangela ukulimala okukhulu emzimbeni womuntu.
Namuhla, indlebe amathonsi asetshenziswa khona izifo ezihlukahlukene indlebe, kodwa abanendlela main kokuba otitis ongaphandle, kanye nabezindaba oyingozi futhi ezingalapheki otitis.
Lesi sifo sibangelwa inqubo ezithathelwanayo ngo yangaphandle canal sokuzwa. Kungaba ngesimo a furuncle noma ekubhebhetselisa lapho avuvukele ngokugcwele sonke isiteshi. Uma yamathumba ngokuvamile zibangelwa Staphylococcus aureus, le otitis ngokukhukhumala kwentamo - Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Escherichia coli futhi Staphylococcus aureus, futhi.
Ephambi kwezinduna ngokukhukhumala kwentamo otitis zangaphandle isicelo indlebe amathonsi eziqukethe ejenti elwa namagciwane, ezifana neomycin futhi gentamicin futhi eqeda ukuvuvukala. Uma ukutheleleka kubangelwa Staphylococcus, kubalulekile ukusebenzisa amathonsi, okuhlanganisa fusidic acid.
Ngakho-ke, ngo-isifo ngokukhukhumala kwentamo yangaphandle otitis kudingekile ukusebenzisa kuhlangene amathonsi otic abadala, ezifaka hlangana ukuhlahluba izinto ngenhla yilezo amathonsi ngokuthi "Garazon" "Anauran" "Polydex" "Deksonsofradeks" "Gikomitsin-Teva", "Sofradeks ".
Kungenzeka futhi ukuba asebenzise izidakamizwa ukuthi babe eqeda ukuvuvukala kanye lendawo izinzwa umphumela, isibonelo ithuluzi ihlanganisa "Otipaks". ngempumelelo nakakhulu isicelo yayo, uma izidakamizwa esetshenziswa njengendlela cindezela.
Okuningi kuphakama imibuzo ngaphezulu ekwelapheni abezindaba otitis. Iza kokubili oyingozi futhi abezindaba exudative otitis, kanye miringit, exudative chronic ubovu ezingamahlalakhona.
Nakuba abezindaba acute otitis iyisifo webhaktheriya bemvelo, kodwa ngaso sonke isikhathi, amagciwane kanye amagciwane kukhona Amagciwane ezinkulu. amathonsi wayo elwa namagciwane kungenziwa kuphela enikeziwe uma kukhona izinhlobo perforated lesi sifo, ngoba abakwazi ukungena ngokusebenzisa ulwelwesi beqinile, njengoba izidakamizwa kakhulu zihlanganisa aminoglycosides, kwema- okuyinto akufanele bavunyelwe ukungena ngaphakathi komgodi tympanic, njengoba beye benza imiphumela ototoxic.
Ngakho-ke, lapho elimala ayikwazi ukusetshenziswa otitis amathonsi okuyinto zihlanganisa norfloxacin, ciprofloxacin, rifampicin.
Uma abezindaba otitis ungaphakathi esigabeni ngaphambi perforation we eardrum, emzabalazweni kanye ubuhlungu kuyingxenye ebalulekile phakathi ukwelashwa. Futhi kulesi simo, kubalulekile ukulwa nesifo, ngakho udinga ukuqhuba eqeda ukuvuvukala, amanzi emzimbeni futhi ukwelashwa ubuhlungu. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwezidakamizwa sinjalo enengqondo kunazo zonke kulesi simo ngokuthi "Otipaks". Anakho yonke imiphumela yempilo-wabuyisela ngenhla. Phenazone futhi lidocaine ookazyvayut umphumela anti-inflammatory futhi wokusiza ngokushesha ubuhlungu, umphumela analgesic inqobo. Ungasebenzisa futhi ezinye amathonsi indlebe, okuhlanganisa izinzwa zendawo salicylate.
"Lioton ijeli" (Iziyalezo yokusetshenziswa)
"Glibenclamide": yokusetshenziswa, ifomu ukukhululwa, isithombe, analogs
"Troxevasin" kusukela izikhwama phambi kwamehlo: ukubuyekezwa. Yokusetshenziswa
"Intombazane Afghan" ngamehlo eluhlaza - uphawu yokuhlupheka i Bonke abesifazane nezingane
Victoria Odintsov ngaphambi nangemva plastic
Banking uhlelo: izinhlobo kanye nezici zabo
Thunga timphahla tekubhukusha ladybug
Dream Ukuhunyushwa: yini uyaphupha inkukhu neqanda?